MHE Operator (Fork-Lift) Truck Driver | IKON Trading Co.,Ltd ﻿
•	လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက်အသုံးပြုမောင်းနှင်သည့်အခါတိုင်း Warning Light ဖွင့်ထားရန်။ လိုအပ်သော Personal Protected Equipment များတပ်ဆင်အသုံးပြုရန်။
•	(To always “ON” warning lights when operating assigned MHE and always wearing PPE [Personal Protected Equipment] during operation.)
•	အ၀င်ကုန်ပစ္စည်းများအားသိုလှောင်ရာတွင်လည်း Operations + Inventory section Head မှ သတ်မှတ်ပေးထားသော နေရာများတွင် အတိအကျထားရှိပေးရန်။
•	(To put away inbound products according to the assigned locations given by Inventory Department and Operations Department.)
•	လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရကုန်ပစ္စည်းများစစ်ဆေးခြင်း။ပြောင်းရွှေ့ဆောင်ရွက်သည့်အခါတိုင်းသက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများအား Inventory Section Heads သို့ပေးပို့ရမည်။
•	(To submit the recorded “Location Transfer” or “Stock Check” Lists to Inventory Section Heads after transferring locations and stock checking.)
•	Machine များအားစတင်အသုံးမပြုမီသက်ဆိုင်သည့်အစိတ်အပိုင်းများအား ကောင်းမွန်မှု ရှိစေရန်နေ့စဉ် စစ်ဆေးလုပ်ဆောင်ရပါသည်။
•	(Checking assigned MHE to ensure they are in good condition before start of each working day.)
•	Location အလိုက်ထားရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများအား ခံနိုင်၀န် ၊ အတိုင်းအတာ ၊ ပုံသဏ္ဍန် စသည်တို့ကို့စစ်ဆေး လုပ်ဆောင်ရမည်။
•	(Checking to make sure that given locations are in good conditions, to withstand weight, height and proper pallet arrangements.)
•	လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ Container , LCL , Border , Air line စသည်တို့မှ ပေးပို့လာသော ကုန်ပစ္စည်းများကို machine အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်သည်များ
•	(Other duies as well as operating MHE upon containers/ shipments [LCL, Border, Air, etc.] arrived to warehouse.)
•	Management ၏ စိစဉ်ညွှန်ကြားမှု များအားလုပ်ဆောင်ရန်။
	(As per Management requirements.)
•	အနည်းဆုံးအထက်တန်းအောင်အဆင့် ( သို့ ) တက္ကသိုလ်၀င်တန်းအဆင့်ရှိရမည်။
•	(At leastaHigh School Diploma or any University Graduate.)
•	အမြင်အာရုံကောင်းမွန်ပြီး၊ မျက်မှန်တပ်ဆင်သူမဖြစ်ရ။
•	(Good eyesight preferable.)
•	မောင်းနှင်ရမည့် စက်ယန္တရားနှင့် ပတ်သတ်သည့် သက်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	(Received adequate training andarecognized relevant MHE certificate.)
•	စက်နှင့်ပတ်သတ်သည့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ အခြေံခံအကြောင်းအရာများကိုနားလည် တက်ကျွမ်းသူဖြစ်ရမည်။
•	(Has basic knowledge in maintaining MHE.)
•	ပေးအပ်ထားသော တာ၀န်များကိုအချိန်နှင့် တပြေးညီ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ သတင်းပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
•	(Good reporting and cooperating skills. Able to execute assigned tasks and duties on time.)
•	အလုပ်လုပ်ရက်တစ်ပတ်လျှင် ၆ ရက်ဆင်းပေးရပါမည်။ လိုအပ်လျှင်အချိန်ပိုဆင်းပေးနိုင်ရမည်။
•	(Flexible to work6daysaweek and overtime when required.)
•	သက်ဆိုင်ရာဂိုဒေါင်အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး ( ၁ မှ ၂ ) နှစ်ရှိရမည်။
•	(Has at least (1) one – (2) two years of working experience in warehousing.
MHE Operator (Fork-Lift) Truck Driver Heavy Equipment/ Machinery Operator Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon IKON Trading Co.,Ltd Heavy Equipment /Machinery Operator Jobs Heavy Equipment /Machinery Operator Jobs Export/ Import/ Trading Jobs in Myanmar, jobs in Yangon